Iqiniso lokuthi lactation enjalo yilowo nalowo owesifazane osuke ifunda enqubeni yokulungiselela ngumama. Ngaphezu kwalokho, bonke ukuphupha ngani, ngoba lokhu kuyinto obukhethekile ongaqondakali esiphakathi kukamama nosana lwakhe ukuthi kuyaqhubeka ngemva kokubelethwa. Ngaphandle usebenzisa yona ingane ukuze uthole umzimba lwamasosha omzimba oluvame ukuba Akhuthaza ukwakheka kwe-amasosha omzimba. Okuningi abanesifiso sokwazi lokho lactation?
Lactation - kuyinqubo engokwemvelo yentuthuko ubisi lwebele e abesifazane ukuthi iqala ngokushesha emva kokuzalwa ngaphansi kwethonya hormone. Uthatha nje isivuno ubisi aphume webele. Abahlukile inqubo lactation ungachazwa ukuthi ubisi olukhiqizwa kanyekanye ne ukusetshenziswa yayo, okungukuthi it libhekene phambili. Kuyaphawuleka ukuthi ibele incike ngokuphelele isenzo yama-hormone emzimbeni kamama, ngakho kule nqubo, adalwe nemvelo, kungase kudingeke glitches esingalindelekile.
Isikhathi lactation ngokuvamile zokhahlamba kusuka emihlanu izinyanga ezingamashumi amabili nanhlanu. Phakathi ekuqaleni inqubo kanye kwesikhathi okungenani ubude bayo amanothi izigaba eziningana, okuyinto kuhluke hypersecretion ubisi lwebele futhi kuqiniswa kwezintathu zomkhiqizo. Uma owesifazane eyeka ibele, lactation eyeka ngaphakathi amasonto amabili kuya kwamathathu. Iveza ubisi kungaba yelule ibele isikhashana.
Ukulungiselela inqubo yemvelo iqala kusukela ngenyanga yesine nofana yesihlanu yokukhulelwa. Kulesi sigaba, lo wesifazane imibuzo efanele ngalokho lactation, futhi lactogenesis laktopoez. Nge umqondo wokuqala siqonda, igama elithi yokugcina kusho ukulungiselela inqubo ebalulekile, futhi uphetha ezintathu ulwazi interrogative yokulondoloza lactation e nabancelisayo.
Ukulungiselela ibele kuyinto ukuze sikhuthaze nezindlala mammary ngokusebenzisa eshaweni Ngokuphambene, massage, njll Lezi zinqubo elula ukunciphisa kungenzeka elula zokubhala kanye imifantu izingono. Ngo isimo sabo okungajwayelekile (nabokhulumile noma flat) Kunconywa ukusetshenziswa pads ekhethekile uyaziveza. Ukuzola futhi steadiness - ngesisekelo lactation evamile. Noma ubani, ngisho ukucindezeleka okuncane kungabangela ukusabela ezingalindelekile hormone kanye ukukhiqizwa ubisi, njengoba sekuphawuliwe kakade, kuncike kuzo. Ukuze wandise lactation kungenzeka ngosizo ukuphuza ezinkulu, kodwa hhayi ngowokuqala izinsuku ezimbili emva kokubelethwa, kungenjalo kukhona ingozi lactostasis (Amapayipi ivinjiwe).
Omama abaningi bathola ukuthi ingane ayinayo ubisi olwanele, futhi baqala ukuqedela ukusuthisa kuye ifomula. Ngenxa yalokho, ukukhiqizwa ubisi kuyehla, futhi phambili umbuzo kanjani ukubuyisela lactation, kuba a okubabayo ekhethekile. Ekugcineni nokubuyiselwa yale nqubo kuyadingeka ukubeka umntwana ibele kaningi ngangokunokwenzeka. Musa singayinaki feedings ebusuku, yiso ngalesi sikhathi prolactin, i-hormone ekhiqizwa engcono. Ukuphuza umbuso linendima ebalulekile ukuvuselela lactation. Ukuphuza itiye plant-based ngokuphelele elawula futhi kuthuthukisa inqubo ukukhiqizwa ubisi. Kuyadingeka ukuba aluqede ngokuphelele emsipheni sindisa nokucindezeleka izimo. Zama enqubeni yokondla Ungasebenzisi zonke izinhlobo amabhodlela futhi izingono, musa ukusheshe engeza Izingxube yokufakelwa.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi yini ibele, indlela angalondoloza ubuyisele inqubo, okusho ukuthi zonke izingane ezizalwayo uzothola izinto ezidingekayo ekukhuleni kanye nentuthuko ngokuqondile umama futhi ube nempilo.